नीति शाहलाई फिल्म खेल्न केले रोक्यो ? (भिडियो) « Ramailo छ
नीति शाहलाई फिल्म खेल्न केले रोक्यो ? (भिडियो)
प्रकाशित मिति : Jun 8, 2018
समय : 12:12 pm
मिस नेपाल ईन्टनेशनल ०१७ नहुँदै थुप्रै निर्माता तथा निर्देशकको नजरमा परेकी सुन्दरी हुन् नीति शाह । तरपनि निर्माता तथा निर्देशकले आफ्नो फिल्ममा अनुबन्धित गराउन सकेका छैनन् । फिल्म खेल्न नीतिलाई केले छेकिरहेको छ त ? यो भिडियो हेर्नुस् :
पढाइका कारण आफुले फिल्म खेल्न नसकिरहेको नीतिाको भनाई छ । यद्पी राम्रो स्क्रिप्ट आएको खण्डमा फिल्म खेल्ने सक्ने उनी बताउँछिन् । ‘अहिले मेरो पढाइ नै प्राइरेटीमा हो । राम्रो तर फिल्मको लागि मैंले पनि सोचेकै छैन’, उनी भन्छिन् ।
नीतिलाई अनमोल केसीले खेलेका फिल्मको लागि समेत अफर गरिएको थियो । तर उक्त अफरलाई स्विकार गरिनन् । निकै फ्यान फलोअर्स भएकी नीति कहिले होलिन् त फिल्म खेल्न राजी ?